मंगलबार विराटनगरमा १६४ जना संक्रमित थपिए, कुन वडामा कति संक्रमित ?
2021-06-01 09-06 | Hamro Biratnagar
विराटनगर, १८ जेठ । मंगलबार विराटनगरमा १६४ जना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै विराटनगरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार ५ सय २७ पुगेको महानगरले जनाएको छ । विराटनगरमा हालसम्म २ हजार ५ सय ८९ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । आज विराटनगरमा कोरोना संक्रमणबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै विराटनगरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १०५ पुगेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
कुन वडामा कति संक्रमित ?
–विराटनगर १ मा ६ जना
–विराटनगर २ मा ५ जना
–विराटनगर ३ मा ११ जना
–विराटनगर ४ मा १० जना
–विराटनगर ५ मा २ जना
–विराटनगर ६ मा ७ जना
–विराटनगर ७ मा ५ जना
–विराटनगर ८ मा २ जना
–विराटनगर ९ मा ७ जना
–विराटनगर १० मा २ जना
–विराटनगर ११ मा ६ जना
–विराटनगर १२ मा ० जना
–विराटनगर १३ मा ४ जना
–विराटनगर १५ मा १ जना
–विराटनगर १६ मा १ जना
–विराटनगर १८ मा १ जना
–विराटनगर १९ मा ० जना
र वडा नखुलेका ९२ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
बिहिबार विराटनगरमा ८३ जना संक्रमित थपिए, कुन वडामा कति संक्रमित ?